Global Voices teny Malagasy » Angola: mpanao fihetsiketsehana mitaky ny rariny momba ny nahafaty an’i Dr Sílvio Dala tany am-pitazonana azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Septambra 2020 15:17 GMT 1	 · Mpanoratra Simão Hossi Nandika (fr) i Laila Le Guen, avylavitra
Sokajy: Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahafatesan'i Dr Sílvio Dala. Eny amin'ireo sorabaventy, teny faneva toy izao no azo vakiana : « Sílvio Dala aho » ; « Dr Sílvio Dala maty tsy nanan-tsiny » ; « Novonoin-dry zareo i Sílvio Dala, Novonoin-dry zareo daholo ny mpitsabo ». Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna lisansa CC-BY 3.0 .
Mitondra mankany amin'ny lahatsoratra amin'ny fiteny Portiogey ny rohy rehetra raha tsy asiana fanamarihana manokana.
Ny 12 Septambra, an-jatony maro ireo Angoley nidina an'arabe tao Loandà, tao Benguela ary tany amin'ireo tanandehibe hafa tamin'ireo farintany 15 nanerana ny firenena, mba hanohitra ny herisetra ataon'ny pôlisy.
Fihetsiketsehana nipoaka avy amin'ny hetsika fanoherana ny nahafaty an'i Sílvio Dala, dokotera iray 35 taona namoy ny ainy tamin'ny 1 Septambra raha izy voatazona vonjimaika tany amin'ny pôlisy .
Araka ny nambaran'ireo manampahefana, dia teo am-pivoahana ny fiarany i Sílvio Dala no nosamborin'ny pôlisy tao amin'ny hôpitaly fitsaboana saina David Bernardino, izay izy no lehibeny. Ny antony dia noho izy tsy nanao arotava.
Avy eo nentin'izy ireo ilay mpitsabo ho any amin'ny biraon'ny pôlisy tao Catotes, ao amin'ny tanànan'i Rocha Pinto, ao Loandà, ary tao izy no nanomboka nahitàna soritra harerahana. « Torana izy avy eo, nitarika fianjerana henjana niafara tamin'ny fisianà ratra madinika teo amin'ny lohany », hoy ny tatitra ofisialy avy amin'ny pôlisy , izay manamafy ihany koa fa teny an-dàlana i Sílvio Dala no namoy ny ainy raha iny ‘ndeha hitondra azy hamonjy toeram-pitsaboana iny ny pôlisy.
Manohitra io filazàna io ny Sendikàn'ireo mpitsabo. Nandritra ny antsafa ho an'ny Voice of America, nambaran'ny filohan'io sendikà io, Adriano Manuel, fa mifanohitra ny fanambaràna ataon'ireo manampahefana , izay vao mainka manamafy ny fieritreratana hoe nisy daroka natao an'ilay mpitsabo.
Tao anaty lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Deutsche Welle , manazava i Adriano Manuel hoe « tsy ny tena izy ilay antom-pahafatesana naroson'ny pôlisy. Na iza na iza mpitsabo, ary nianatra ny fitsaboana dia samy mahafantatra fa tsy izany no hitarika amin'ny fahafatesan'i Sílvio. » Io lahatsoratra io ihany koa no mitanisa loharano iray avy amin'ny ministeran'ny atitany manamafy fa ny valin'ny fitsirihana ny razana, natao teo anatrehan'ny mpampanoa lalàna sy ny fianakaviana, dia manilika ny fiheverana fisianà herisetra natao tamin'ilay mpitsabo.
Nambaran'ilay sendikàn'ireo mpitsabo ny fikasàn-dry zareo hitory ny pôlisy sy hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsaràna. Mandritra izany fotoana izany ihany, nambaran'ny governemanta angôley ny fanangànana kaomity iray hanadihady , iarahana miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamàna handinika ny tena zavanitranga.
Ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 12 Septambra, tsy mitombina ary tsy inoany ny fanazavàna naroson'ny pôlisy momba ny antony nahafaty an'i Sílvio Dala. Eny amin'ireo sorabaventy nolanjaina nandritra ireo fihetsiketsehana tao Loandà, izay nitranga tany amin'ireo tanàndehibe samihafa nanerana ny tanàna, izao no azo novakiana : « Ampy izay ny maty, nokaramaina hiaro ry zareo, fa tsy hamono ».
Ho fanampin'ireo sorabaventy hoe « Sílvio Dala aho », « Novonoin-dry zareo i Sílvio Dala » ary « Takiako ny hivoahan'ny marina », nangatahan'ny sasany tamin'ireo mpanao hetsipanoherana ihany koa ny fametraham-pialàn'ny minisitry ny atitany, Eugénio Laborinho. Ny Sendikàn'ireo mpitsabo sy ireo fikambanana isankarazany avy amin'ny fikambanana sivily no nikarakara ireo diabe.
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahatesan'i Dr Sílvio Dala. Eny amin'ireo sorabaventy, teny faneva toy izao no azo vakiana: « Sílvio Dala aho, ilay dokotera maty tao amin'ny biraon'ny pôlisy. » Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna ny lisansa CC-BY 3.0 .
Fihetsiketsehana tao Loandà ho setrin'ny fahatesan'i Dr Sílvio Dala. Sary an'i Simão Hossi, nampiasàna ny lisansa CC-BY 3.0 .
Hatramin'ny nanombohan'ny fisian'ilay valanaretina tao Angolà, marobe no voarakitra ireo firotsahana an-tsehatra niharo herisetra nataon'ny pôlisy  [fr], izay ny sasany dia nanaisotra ny ain'ireo olompirenena nandritra ny fibedesana azy ireny hanaraka ireo fepetra henjana [momba ny COVID-19].
Tao anaty fanambaràna iray ho an'ny masoivohom-baovao portiogey Lusa , nangatahan'ilay mpiangaly gadona rap, Brigadeiro 10 Pacotes, na i Bruno Santos raha ny tena anarany, ny hametrahan'i Eugénio Laborinho fialàna, ary ny hanomezana fampiofànana tsara ireo olon'ny pôlisy, mba hanatsaràna ny fitondrantenan-dry zareo ireny :
« Andrimpanjakana iray ny pôlisy, izay tokony hiantoka ny fisian'ny fitokian'ireo olompirenena. Amin'izao fotoana izao, miaina anaty tsy fandriampahalemana mahatsiravina isika, ka izay olompirenena rehetra manana raharaha amin'ny pôlisy dia raiki-tahotra avokoa. »
Marobe ireo olona naneho ny fitroaran-dry zareo teo amin'ny Facebook sy Whatsapp. Ilay mpikatroka sady manampahaizana Nuno Álvaro Dala dia nilaza ny heviny tao amin'ny Facebook-ny  :
TOMPONANDRAIKITRA TAMIN'NY NAHAFATY ANI Dr SÍLVIO DALA NY POLISY
Tena henjana be sy milaza zavatra betsaka ireo sary. Tsy maintsy takiantsika ny hivoahan'ny marina. Tsy maintsy saziana noho io heloka bevava nataony io ny polisim-pirenena. Tsy azontsika avela handeha fotsiny izany.
Tao amin'ny Twitter, izao no nolazain'i Isabel dos Santos, filoha fahiny tao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny Orinasan-tsolika Sonangol sady zanaky ny filoha fahiny tao Angolà José Eduardo dos Santos:
#JeSuisSilvioDala Amin'ny Sabotsy, amin'ny 12h 30 eo amin'ny tany malàlaka ao Mutamba, hisy « fihetsiketsehna iray hatao am-pilaminana sy am-pahanginana » karakarain'ny Sendikà Nsiônalin'ireo Mpitsabo eto Angôlà (SINMEA). Asaina daholo ireo matianin'ny fahasalamàna, ireo sendikà hafa ary ireo fikambanana sivily [mba hanao hetsipanoherana] hanohitra ny herisetra ataon'ny pôlisy ho fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana an'i Sílvio Dala.
[lahatsoratra anaty rohy] Midina an'arabe ireo Angoley [mba hanao hetsipanoherana ] hanohitra ny herisetra ataon'ny pôlisy sy ho fampitsaharana ny fahafatesana.
Ny herisetra ataon'ny pôlisy angôley, izay efa nahafaty olona am-polony hatreto – ary mpitsabo ny iray tamin'izany- nandritra ny valanaretina COVID-19, no afo nandrehitra ireo fihetsiketsehana roa hatao amin'ny Sabotsy.
Mbola tao amin'ny Twitter ihany, nanontany tena i Ale Alejandro momba ny anjara toerana noraisin'ireo Angôley mpanefy hevitra (mpitari-kevitra) tao anatin'ity raharaha ity:
Rehefa maty i George Floyd, naneho ny fanohanany ny hetsika Black Lives Matter (Misy dikany ny ain'ny mainty hoditra) ireo lazaina fa « Angôley mpitari-kevitra », saingy ireo rahalahintsika mpitari-kevitra resahana ireo ihany no tsy manao na inona na inona manoloana ny nahafaty ny Dr Sílvio Dala !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/27/149888/
 raha izy voatazona vonjimaika tany amin'ny pôlisy: https://www.dw.com/pt-002/angola-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pede-calma-ap%C3%B3s-morte-de-m%C3%A9dico/a-54836997
 tatitra ofisialy avy amin'ny pôlisy: https://www.dn.pt/mundo/medico-angolano-apanhado-pela-policia-sem-mascara-na-rua-morre-na-esquadra-12630867.html
 mifanohitra ny fanambaràna ataon'ireo manampahefana: https://www.voaportugues.com/a/morte-de-m%C3%A9dico-detido-pela-pol%C3%ADcia-abala-angola/5574209.html
 lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Deutsche Welle: https://www.dw.com/pt-002/eu-sou-s%C3%ADlvio-dala-sociedade-civil-angolana-protesta-contra-a-morte-do-m%C3%A9dico/a-54908113
 firotsahana an-tsehatra niharo herisetra nataon'ny pôlisy: https://fr.globalvoices.org/2020/08/24/255136/